Fandrefesana sy fantsakana Geotextile - Blog Ellisott Dredges
Fandrefesana sy fantsakana Geotextile
Desambra 1, 1999
Source: tamin'ny martsa A. Torre - Vaovao momba ny varotra injeniera sivily
Ny fantsona feno feno menaka dia nampiasaina tamin'ny tetik'asa amoron-tsiraka sy anaty tanàna. Ny fantsona, novokarin'ny polyester na polypropylene geotextile, dia feno hidiran'ny tsiranoka, toy ny Ellicott® marika Series 370 na Ellicott lehibe kokoa® marika "Dragon®”Dredge cutter. Ireo fantsona geotextile dia matetika fenoina fitaovana eo an-toerana; na izany aza, azo ampidirina sy ampiasaina ny fitaovana hafa. Fampiharana mahazatra dia ahitana: famerenana amin'ny laoniny ny fasika, fananganana dike, fananganana lalan-driaka, haran-dranomasina artifisialy ary fitoerana fako tsotra. Ny fantsona dia fenoina eo amin'ny toerany ary tsotra sy mora ny fametrahana azy.
Series Series 370 Ellicott® Brand Dredge
Ny famenoana fantsona geotextile miaraka amin'ny fitaovana dredged dia nampiharina nandritra ny taona maro; na izany aza, ny teknolojia dia mbola heverina ho amin'ny fahazazany. Ity tantara fohy manaraka ity dia nalaina tamin'ny ampahany tamin'ny "Geotextile tubes-Case Histories and Lesons nianatra" nataon'i Sprague, Bradley, Toups, ary Trainer.
Ny ezaka miverimberina hanamafisana ny tombotsoan'ny fahafahan'ny fitana tany geotextiles dia miharihary amin'ny fanandramana manangana rafitra liner avy amin'ny fantsona geotextile feno hydraulika. Nambaran'i Sprague fa ny fiezahana hameno fantsona lamba tsy mety simba amin'ny fasika hatramin'ny datin'ny 1967. Raha ny fantatra dia ny fasika no nofenoina safidy ho an'ireo fantsona geotextile feno hydraulic noho ny fahaizany milamina ao anaty fantsona sy malalaka. tatatra, amin'izay dia mamorona rafitra milamina. Vokatr'izany, hoy i Sprague, ny ankamaroan'ny fampiasana fantsona feno fantsona feno volo hatreto dia misy famenoana fasika. Ny fivoarana fantsona geotextile vitsivitsy voarakitra an-tsoratra dia azo asongadina ho manan-danja manokana.
Tamin'ny faran'ny taona 1970 dia namboarina ny fantsona geotextile feno fasika vita amin'ny rivotra, vita amin'ny lamba tsy azo sakanana. Ny rafitra, amidy amin'ny anaran'ny varotra "Longard Tube," dia nampiasaina tamin'ny fametrahana andrana maro.
Ny fampiasana fitaovam-pitomboana hamenoana ny fantsom-booterabile dia nosedraina voalohany tany Brezila sy Frantsa tamin'ny fiandohan'ny 1980. Tany Brezila, ny kesika feno fitoeran-drano dia namboarina avy amin'ny fantsom-bavan'ny tany. Ilay teknika dia nampiasaina mba hitoka-monina ary misy ny fihazakazaka tsy ho voaloto any Frantsa.
Sprague dia nanambara fa tao amin'ny 1989 ACZ Marine Contractors BV any Holandy dia namoaka fantson-drano feno rano feno rano fantson-drano mikotrika amin'ny fananganana tohodrano ambanin'ny rano amin'ny fampiofanana renirano. Tamin'ny alàlan'ny fantsom-bolo vita amin'ny crane iray vita tamin'ny kamory, dia namboarina tamin'ny alàlan'ny fametrahana sy hametrahany ireo fantsona efa vita. Havitrika iraika ambin'ny folo no novolavolaina, nampiasaina fantsona 500 betsaka.
Ny famenoana mivantana ny fantsona geotextile eo amin'ny toerana misy ny tsipika fanaterana dredge dia nahomby tamin'ny taona 1988 tao amin'ny Ranomasina Avaratra, teo akaikin'ny morontsirak'i Alemana. Ny fantsona dia manohy manome famenoana ny fenon'ny sisin'ny tany ary fiarovana amin'ny onja sy onja amin'ny sisin-dranomasina.
Natolotry ny tafika amerikana amerikanina Corps of Engineers, ny fifohazana vaovao amin'ny fantsona geotextile dia nanomboka nipoitra tamin'ny fiandohan'ny 1990 tamin'ny voalohany nanombohan'ny governemanta amerikana hampitombo an'io teknolojia vaovao io. Fitsapana maro mahomby no nampiasa fantsona geotextile feno fasika toy ny valanoranony ary feno rakotra mangina, organika mba hitarina amin'ny fanitarana. Ireo fanandramana ireo dia ampy handresy lahatra ireo injeniera amoron-tsiraka bebe kokoa amin'ny fikarohana ny mety hisian'ny fantsakana geotextile.
Rehefa nisarika ny saina bebe kokoa ny teknolojia fantsona geotextile, dia tanteraka ny filàna mamorona fenitra indostrialy hametrahana fitokisana ary hisarika ny saina bebe kokoa. Nandritra ny taona 1999, ny mpikambana ao amin'ny orinasa mpamokatra fantsona geotextile dia nanatevin-daharana ny Geosynthetic Research Institute (GRI) hamolavola fenitra indostrialy ho an'ny famokarana fantsona geotextile sy ny fomba fametrahana. Ny antontan-taratasy GRI vaovao dia mitondra ny lohateny hoe "Fomba fanandramana, fananana ary matetika ho an'ny fantsona Geotextile matanjaka be ampiasaina amin'ny firafitry ny morontsiraka sy ny renirano." Ny antontan-taratasy dia famaritana mahazatra ho an'ny geotextiles ampiasaina amin'ny fananganana fantsona, ary koa ny sanda ara-teknikan'ny geotextiles. Ary koa, ny fomba fanamboarana sy ny fametrahana fantsona ary ny mari-pahaizana takiana amin'ny mpiorina mametraka dia voalaza. Na dia torolàlana tsara ho an'ny famaritana ny fantsona geotextile aza ity antontan-taratasy ity dia tsy fanampiana amin'ny famolavolana izany.
Araka ny nasongadin'i Sprague, Goodrum, ary Bradley, mpanoratra ny "Dredged Material-Filled Geotextile Tube: Design and Construction," ireo hevitra hamolavolana fitaovana goavambe feno dredged feno fantsona geotextile sy kaontenera dia tsy voarakitra tsara. Ankoatr'izay, ny takiana amin'ny geotextile dia tsy takatra tsara ary vitsivitsy ny antsipiriany voalaza momba ny fiasan'ny fitaovana dredging na ny fahombiazan'ny karazana fitaovana dredged. Na izany aza, ny fametrahana miorina amin'ny teknika famolavolana "voahevitra" dia voaporofo fa tena nahomby. Noho izany, ireo teknika ireo dia teboka fanombohana hampivelatra ny fomba famolavolana fikarohana lalina.
Fihazonana ny fikojakojana sy ny fahatokiana ny rafitry ny fantsom-bolongana feno vinaingitra dia omen'ny valopy geotextile. Ny fifidianan'ny lamba dia miorina amin'ny toetra misokatra rehetra, izay tokony hifanaraka amin'ny habetsaky ny haben'ny singa sy ny fahazoana aina, ary ny tanjaka, izay tokony ho ampy hanoherana ny fanerena feno. Ny akorandrafitra vita amin'ny lamba izay mampiditra ny lamba tsy roa ary lamba tenona ho an'ny filtration sy tanjaka, indraindray, dia ampiasaina indraindray.
Ny fantsom-bary feno geotextile feno dredged dia azo fenoina fitaovana afaka ampitaina amin'ny alalàn'ny rivotra. Clayey sy silty dredged fitaovana no nampiasaina ho an'ny fametrahana dike dike, fa ny morontsiraka na ny ony fasika voajanahary no safidy tsara indrindra. Ny mpamorona dia tokony manombatombana ny toetran'ny olona mameno mba hanampy amin'ny famaritana ny elanelam-potoana sy ny fahita matetika amin'ny seranan-tsindrona sy fanampiana ao amin'ny fantsona geotextile.
Ny fantsom-bokotra feno geotextile feno volo dia boribory eo amin'ny sisiny ary mihorona ambony. Ny traikefa an-tsaha dia manaporofo fa azo atao ny mameno fantsona 70 ka hatramin'ny 80 isanjaton'ny savaivony boribory ambony indrindra ara-teôria, na dia 50 ka hatramin'ny 60 isan-jato aza no vita matetika.
Mba hahatratrarana ny fitoniana amin'ny toe-piainana mahery vaika toy ny drag, lift, ary inertia, ny fahazoana lanjan'ny singa avo lenta ho an'ny singa feno dia ilaina. Ny herin'ny onja ankehitriny sy ny onja dia tsy maintsy tombanana amin'ny fanombanana ny fahamarinan-toerana fantsona geotextile feno. Nanamarika i Sprague fa na dia mbola tsy napetraka aza ny teknika famakafakana voafaritra, dia nanolo-kevitra ny hanovana fomba Miniken novaina araka ny voasoritra ao amin'ny US Army Corps of Engineers; "Boky Torolàlana momba ny fiarovana ny sisin-dranomasina" dia mety hanome fomba mety amin'ny fanombanana ny fahamarinan-toerana misy ireo singa feno eo ambanin'ny fandefasan'ny onja. Ny fitsapana modely dia mampiseho fa ny isan-jaton'ny fantsona geotextile izay feno fitaovana dredged dia masontsivana lehibe mifandraika amin'ny fitoniana. Ny fandinihana endrika manan-danja iray hafa dia ny fitoniana anaty ny fantsom-pantsaka "mifangaro".
Noho ny hetsiky ny onja sy ny onja ankehitriny, ny rafitra namboarin'ireo fantsona iray na maromaro dia mety hampisy lavaka fikorianana mifanakaiky aminy, mety hiteraka tsy filaminana eo amin'ny lafiny teknika. Noho izany, ny endrika dia tsy maintsy ahitana apron lamba sivana ho fiarovana scour. Ny apron lamba lamba sivana, fantatra koa amin'ny hoe apron scour, matetika dia misy fantsona kely, antsoina hoe fantsona vatofantsina, namboarina tao amin'ny sisin'ny moron'ny aprona na nanodidina ny perimeter manontolo. Ny fantsona vatofantsina dia feno fitaovana dredged mba hampiorenana ny epron scour. Izy io dia tsy maintsy manana toetra mampiavaka ny filtration izay mifanentana amin'ny tany fototra sy ny tany famenoana ny fantsona vatofantsika. Ny apron scour dia tokony hanitatra elanelana ampy eo alohany sy ao ambadiky ny rafitra fantsona geotextile hisorohana ny fikororohana ny fototra.
Fametrahana Tube Geotextile
Ny fijerena isan-karazany dia tsy maintsy iaraha-mandinika ny fametrahana ny fantsona geotextile. Ny ankamaroan'izy ireo dia tokony hamahana ny fanondroana ny tetik'asa. Satria ny geôtextile dia vita amin'ny geotextile, ny torolàlana ASTM manara-penitra dia tokony harahina momba ny fitahirizana sy ny fikarakarana. Ny torolàlana ASTM momba ny fanamboarana geotextiles koa dia tokony ho arahina ao amin'ny tranobain-drindrina.
Alohan'ny hametrahana ny fantsona geotextile sy ny apron-jiro dia apetraka amin'ny toerana, ny faritra dia mazàna amin'ny fampiasana fitaovana fananganana grady. Ilay toerana tokony hametrahana ny fantsona geotextile dia matetika no voamarika miaraka amin'ireo tsatòka. Tsatoka lehibe na vatofantsika koa dia azo ampiasaina amin'ny elanelana efa voafaritra mialoha mba hahafahan'ny fantsona geotextile hametahana azy ireo amin'ny tady mba hahazoana antoka ny fanovana mety mandritra ny famenoana.
Ny fandefasana ny efron mitsoka sy ny fantsona geotextile dia matetika tanterahana amin'ny alàlan'ny fanalavoana azy ireo tsy ampandehanana (na ny sodina), natolotry ny fantsona sy ny apron'ny mpanamboatra. Ny apron mitsoka dia napetraka alohan'ny fantsona geotextile, na izany aza, amin'ny tranga sasany dia mety apetaka amin'ny faran'ny fantsona geotextile ao amin'ny fantsom-panodinana ny apron. Raha vao napetraka tanteraka sy napetraka ary azo antoka ny fantsona apron, dia tsy voafehy mihitsy ny fantsona geotextile. Tsy tokony hoheverina amin'ny toerana miaraka amin'ireo seranan-tsindrona sy ny fanampiana vonjy taitra eo ambony afovoany. Vantany vao napetraka io dia azo raikitra ao amin'ireo tsatoka na tsipika efa napetraka teo aloha.
Ireo fantsona vatofantsika hita eo amin'ny apron'ny scour dia matetika fenoina voalohany mba hanomezana ballast an'ny apron scour. Indraindray ny fantsona vatofantsina dia fenoina fitaovana fanaovana dredging mitovy ihany izay hampiasaina hamenoana ilay fantsona geotextile; na izany aza, azo ampiasaina ihany koa ny paompy kely kokoa satria matetika ny tubes vatofantsika dia kely (savaivony roa metatra na latsaka). Ny paompy fantsom-bozaka dia azo alaina amin'ny alàlan'ny tsiranoka tsotra amin'ny geotextile na amin'ny seranan-tsambo fidirana mialoha.
Rehefa voaaro ny sakam-bary amin'ny alàlan'ny famenoana ny fantsom-piainana dia feno ny fantsona geotextile. Maharitra ela kokoa ity dingana ity ary be pitsiny kokoa noho ny famenoana ireo fantsona vatokely fotsiny. Ny fantsom-panafody (na ny tsindrona injeniera) ao amin'ny dredge dia tsy maintsy apetraka ao anatin'ilay seranan-tsindrona tsara amin'ny fantsona geotextile. Ireo seranana amin'ny tsindrona dia noforonina mitovy amin'ilay geôtxtile izay mahaforona ny fantsona. Ny seranan-tsambo matetika 5 tongotra (1.5 m) lava ny 18 santimetatra (457 mm) ny savaivony, na izany aza, ny fantsona dredge dia tsy tokony ho lehibe ity; Matetika ny fantsom-pivarotan-drongon-drongony 12 (305 mm) santimetatra fantsom-panafody dia ampiasaina. Ny fantsona dia tokony hampidirina manodidina ny 2 / 3 amin'ny lalana mankany amin'ny seranan-tsindrona ary mahazo antoka amin'ny fametahana fihenjanana. Ny fantsom-panafody sy ny seranan-tsindrona dia mahazo antoka amin'ny fametahana fihenjanana. Ny fantsom-panafody amin'ny fantsom-panafahana sy ny tsindrona dia tokony hasandratra amin'ny toerana mitsangana miaraka amin'ny paingina na amin'ny fandihizana.
Ny ankamaroan'ny fantsona geotextile dia misy seranan-tsambo maromaro mandritra ny halavan'ny fantsona. Ny seranan-tsambo dia matetika dia eo amin'ny sisin'ny afovoan-tampony amin'ny faritra tsy misy mihoatra ny tongotra 50 (15 m). Ireo seranana ireo dia ampiasaina amin'ny famenoana ary koa ho fanamaivanana ny rano be loatra. Ny famaritana ny tontolon'ny seranan-tsambo dia tsy maintsy ataon'ireo mpiantoka sy / na ilay injeniera alohan'ny fanamboarana ny fantsona geotextile. Ny antony maro dia hisy fiantraikany amin'ny elanelana mifanentana, toy ny haben'ny fantsona geotextile, ny haben'ny fantsona dredge, ny fatran'ny dredge, ny karazan'entana feno ary ny rano azo ampiasaina ho toy ny fiara fitaterana ireo rano ireo.
Miankina amin'ny elanelana misy seranan-tsambo tsindrona, ny fanoratana ny fitaovana maloto ary ny fahaizan'ny dredge, ny sasany amin'ireo seranana tsindrona dia tsy ho ampiasaina mihitsy. Ohatra, ny fantsona geotextile lava 200 (61 m) lava dia mety misy seranan-tsambo dimy. Raha mety tsara ny fepetra ary mahavita ny dredge, dia azo inoana fa feno ny fantsona geotextile 200-tongotra (61 m) lava be avy any amin'ny seranan-tsindrona iray izay hita eo akaikin'ny faran'ny fantsona iray. Ny seranan-tsindrona izay misy ny faran'izay lavitra dia avela hisokatra hamela ny fandroahana ny rano be loatra, ka toy ny seranan-tsambo. Ny fatotra rehetra eo anelanelan'ny dia hamatotra ary avela tsy ampiasaina. Raha tsy mety amin'ny famenoana ny seranan-tsambo iray ny fepetra, dia tokony ho tapa-kevitra ny elanelam-potoana mety hamindra ny fantsona dredge hanohizana ny famenoana ny fantsona. Ny asa famenoana dia tanterahana amin'ny alàlan'ny fampiasana port iray ho an'ny tsindrona ary ny iray (na) maromaro ho fanamaivanana. Rehefa mandroso ny fandidiana dia tokony hikatona ny seranana rehetra ao anaty fizarana efa vita mba hisorohana ny fahaverezan'ny fitaovana ao anaty fantsona.
Alohan'ny hamenoana ny fitaovana matevina dia mameno ny rano tadiaviny fotsiny ny fantsona. Raha vita ny haavon'ny faniriana dia afaka mampiditra solika ao anaty fantsona geotextile ny mpandraharaha ny dredge. Amin'ny alàlan'ny famenoana rano amin'ny fantsona aloha dia avela hiparitaka amin'ny rano fantsona ilay fitaovana matevina. Ny solika vaovao sy ny rano mandeha amin'ny fiara dia hanosika fotsiny ny rano efa misy.
Ny ankamaroan'ny tetikasa dia misy fantsona geotextile marobe izay tsy maintsy fenoina amin'ny filaharana voafaritra mialoha. Ny fantsona tsirairay dia mazàna fenoina tanteraka alohan'ny fametrahana fantsona geotextile manaraka. Ny fantsona manaraka dia azo apetraka amin'ny fantsona misy ary fenoy. Ity fomba fametrahana ity dia hamorona faritra ambany eo anelanelan'ny fantsona noho ny tendrony boribory. Raha tsy ilaina ny toerana ambany dia azo ampiasaina ny fomba fifandraisana hafa. Ny fampiharana fanao mahazatra indrindra hamongorana, na farafaharatsiny mba hampihenana, ny haben'ny fahaketrahana amin'ny alàlan'ny fampiasana overlap. Amin'ity karazana fifandraisana ity dia tsy maintsy apetraka ao ambanin'ny rambon'ny fantsona naparitaka teo aloha ny fantsona geotextile manaraka (ary matetika ny apron scour). Ny fantsona "ambany" dia tsy miparitaka tanteraka amin'izao fotoana izao. Mazava ho azy fa tsy maintsy tanterahina io fomba mifindrafindra alohan'ny famenoana rano na solida io fantsona geotextile io. Vantany vao vita ny fifandraisana, dia fenoina ilay fantsona geotextile "voalohany" araka ny efa voalaza teo aloha. Ny fantsona manaraka rehetra dia nofenoina tamin'ny fomba mitovy ihany koa, na izany aza, ny faritra amin'ilay fantsona napetraka ao ambany dia tsy ho fenoina ary tokony hisy vokany ny fifamatorana somary tery (sy "haavo").
Rehefa vita ny fametrahana dia tsy maintsy arovana tsara ireo seranana amin'ny tsindrona mba hahazoana antoka fa tsy ho rovitra izy ireo mandritra ny hetsika onjam-peo. Ny fomba marina amin'ny fahazoana antoka ny seranan-tsindrona dia homen'ny mpanamboatra tiana geotextile. Saingy, ny fomba fanazarana mahazatra dia ny manapaka fotsiny ny seranana amin'ny tsindrona, raha mamela ny lamba be loatra mihosotra (na miankohoka) midina any ambonin'ny tampon'ny fantsona. Avy eo ny fitaovana miforitra dia aarahina any amin'ny fantsom-baravarana amin'ny alàlan'ny fampiasana peratra fanakonana miorim-bolo-tsofina na fametahana karazana fampihenanana.
Ny fantsona geotextile feno sy mihidy dia hitohy amin'ny andiam-baravarana ary hitohy hatokana bebe kokoa mandritra ny fotoana maharitra ireo doka. Ny faharetan'ny andiany sy ny fampifangaroana dia miovaova arakaraka ny karazana geotextile sy fenoy fitaovana. Matetika ny akora masiaka dia hitondrana haingana kokoa noho ny fitaovana tsara toy ny tanimanga mangina. Vantany vao nitranga ny habetsaky ny andiam-baravarana dia azo alevina, averina ao anaty rano indray ny fantsona geotextile.
Na dia nampiasaina nandritra ny taona maro aza ny teknolojia fantsona geotextile feno dia nahatratra ny sain'ny orinasa ny tetikasa avo lenta. Amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ny GRI hanoratana ny mari-pahaizana manokana momba ny indostrian'ny indostria, dia mahazo fahatokisana bebe kokoa ny fomba. Ny teknolojia sy ny indostria dia mbola tanora, saingy ny protocole vaovao sy tsara kokoa dia tsapa isan'andro. Ny ho avy dia azo antoka fa mamirapiratra ho an'ny fantsona geotextile feno rano.
(Geotube® dia marika voasoratra anarana ao amin'ny Ten Cate Nicolon)
Notsongaina avy tamin'ny CE News ho an'ny orinasan'ny injeniera sivily